३३० फीट उचाईबाट बन्जी जम्प गर्दा डोरी छुटेपछि के भयो,…. – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/३३० फीट उचाईबाट बन्जी जम्प गर्दा डोरी छुटेपछि के भयो,….
३३० फीट उचाईबाट बन्जी जम्प गर्दा डोरी छुटेपछि के भयो,….
एजेन्सी- बन्जी जम्प शाहसिक खेल हो । यसमा धेरै साबधानी अपनाइन्छ । जो कोहीले बन्जी गर्ने आँट पनि गर्दैनन् ।बन्जी जम्म गर्नेहरुका लागि धेरै सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ नसोचेको दुर्घटना हुनसक्छ ।
हालै एकजना बन्जी जम्प गर्ने क्रममा डोरी चुँडिएर भुइँमा बजारिएका छन् । घटना पोल्याण्डको हो । पोल्यान्डको गडीनियामा एकजना बन्जी जम्पर ३३० फीट माथिबाट हाम्फाल्ने क्रममा डोरी चुडिँदा भुइँमा बजारिएर करङ भाँचिएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
स्वास्थ्य ठीक भएपनि तत्काल उनी हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थाम भने रहेन । गडीनिया प्रहरीका क्रिस्टोफ कुस्मीरजिकले घटना पछि घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी र कर्मचारीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइएको बताए ।
स्थानीय समाचार वेबसाइट ट्रोमियास्तो डट् पीएलका अनुसार, भुइँमा बजारिए पछि उनी अचेत भए र उनलाई अस्पताल लगियो । भाग्यवश दुर्घटनाबाट उनी बाँचे । उनको करङ टुक्रिएको छैन र अलिकति भाँचिएको अस्पतालले जनाएको छ । उनको अन्य अंगमा पनि केही चोट पुगेको बताइएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
आर्मी र सातदाेबाटाेले अंक बाँडे
कोरोनाबाट नेपालमा पहिलोपटक डाक्टरको मृत्यु
दाङमा जिप दुxर्घxटxना हुँदा ६ जना घाइते
दाइजोमा मोटरसाइकल नपाएपछि बेहुलीका दाईलाई हाने बेहुलाले गो’ली
पलको एक्कासी आयो खुशीको खबर पल अब जिल्लाबाटै छुटने पक्का दाइले खोले पैसाको चलखेल र वकील फेर्ने कुरा (भिडियो सहित)